Abasebenzi bafuna kumiswe umphathi wesibhedlela | News24
Abasebenzi bafuna kumiswe umphathi wesibhedlela
ISITHOMBE: lethiwe makhanyaAbanye abasebenzi ngesikhathi kunombhikisho
ABASEBENZI basesibhedlela i-Northdale abangaphansi kwenhlangano i bavuke umbhejazane ngoLwesibili mhla zili-15 kuMfumfu (October) babhikisha emagcekeni alesi sibhedlela bekhala ngomphathi uNkk Buhle Maphanga abathi uyehluleka ukusilawula.
PHAKATHI KOHLU LWEZIKHALO ZABO ABASEBENZI BAFUNA LOKU OKULANDELAYO :
•Bafuna kumiswe umphathi wesiphedlela ngesikhathi kusaqhubeka uphenyo.
•Umnyango unikezele bonke abasebenzi ngezinsiza kusebenza kanye nomfaniswano.
•Umnyango ugcwalise zonke izikhala Indlela ekuqashwa ngayo ezikhundleni eziphezulu.
•Kunyuswe abasebenzi abasuka ku-level 2 baye ku-level 3
USihlalo weNehawu uMnu Skhumbuzo Mdlalose esiFidundeni iHarry Gwala uthe enye yezinkinga ababhekene nayo ukuthi abahlengikazi abangama-staff nurse ekumele engabe kade bakhushulwa ezikhundleni ngoba bakufanele kodwa loko akwenzeki. Uthe abanye abasebenzi futhi kulesi sibhedlela abanazo izinsiza kusebenza nokubeka izimpilo zabo engcupheni yokuthi bathole izifo.
“Sekuphele iminyaka labahlengikazi bengadluliselwa esigabeni esilandelayo ekubeni kubafanele. Abasebenzi kumele benze umsebenzi obafanele nokuyiwona bangenziswa umsebenzi okugasiwona owabo,” kubeka yena.
Uqhube wathi baphinde babe nenkinga nomphathi walesisibhedlela nabathi ubuye abe inkinga uma kuza ezintweni zamabhuku aphathelene nesibhedlela. Uthe umphathi walesi sibhedlela uzama ukwenza uqhekeko phakathi kwabasebenzi abangaphansi kwe-Nehawu kanye nabanye bezinye izinhlanga abangekho ngaphansi kwale nhlangano.
“Abaphathi abayeke ukwenza uqhekeko phakathi kwabasebenzi besebenzisa uhlanga. Benza angathi i-Nehawu ilwa nohlanga oluthile, nokuyinto engesilo iqiniso. Amanye amalunga ethu awezinye izinhlanganga kanti futhi le nhlangano eyanoba ubani.
“Umphathi kumele ayeke ukwenza lolu qhekeko, kumele luphele ngoba uma kungenzeki loko sizomlandela simcele ukuba ashiye kulesi sibhedlela.”
Ngaphandle kwalezi zinkinga uMnu Mdlalose uthe abasebenzi abaningi lapha kulesi sibhedlela abanazo izinsiza kusebenza ezifana nezinqola zokuqhuba amashidi emibhede uma ngabe eyowashwa. Uthe abasebenzi baphoqeleka ukuba bawaphathe bona ngezandla nathe loko kubeka izimpilo zabo engcupheni.
“UMnyango wezeMpilo esifundazweni saKwaZulu-Natal uyazazi lezi zinkinga. Emasontweni amabili edlule sibambe umhlangano nomnyango nalapho sibabikele khona lezi zinkinga kodwa ayikho impendulo esisayitholile. Kusukela ngonyaka wezi-2011 siloku siphakamisa izinkinga zokungaphathwa kahle kwezibhedlela sitshela umnyango ukuthi awulungise izinkinga zawo. Uzoyisungula iNational Health Investment usahlulwa ukulungisa izinkinga ezincane ezifana nokunikezela abasebenzi ngezinto zokugqoka. Kumanje eMgungundlovu sibhekene nenkinga yokushoda kwama-ambulensi. Kumele engabe sinama-ambulensi ali-120 kodwa akhona ali-18 kuphela nawo kulawo amanye awanazo izinsiza kusebenza ezanele.”
Ihlu lwezikhalo lwamukelwe esinye sezikhulu kulesi sibhedlela.
Banikezwe kuze kube ikusasa (ngoLwesihlanu) ukuba baphendule kuhlu lwezikhalo.